Mazano ekuvandudza ruzivo rwevashandisi kuburikidza newebhu dhizaini | ECommerce nhau
Makiyi ekuvandudza ruzivo rwevashandisi kuburikidza newebhu dhizaini
Mumazuva ese aya, tataura kwenguva refu muiyi blog nezve maitiro ekuvandudza ruzivo rwevashandisi. Kubva pane akasiyana maturu, sekushandisa iyo ruzivo rwekuvandudza shanduko, nezvimwe. Nekudaro, pamwe chinonyanya kukosha pane zvese, chiri mune dhizaini yatinogona kuve nayo pane webhusaiti yedu. Uye zvinocherechedzwa kuti kunyangwe Google inopa kukoshesa kwerudzi urwu rwewebhusaiti muinjini yekutsvaga, nekuti kuchinjika kunounza mubayiro.
Nechikonzero ichocho, Tichaona izvo zvinhu zvinobatanidzwa mukugadzirwa kwewebhu, izvo zvinotibvumidza isu kutarisa kune mushandisi, uye nekuvandudza ruzivo rwavo. Wana kugutsikana kwako kunokosheswa neGoogle, uye uwane akawanda traffic pairi. Nekuti chiitiko chiri nani chevashandisi uye SEO zvakabatana zvakanyanya.
1 Chii chandinofanira kukoshesa mukuvandudza ruzivo rwevashandisi?
2 Maumbirwo ewebhu
3 Dhizaini yakashandisirwa kumidziyo yakasiyana
4 Chengetedza zvirimo pane zvaunonyora pawebhusaiti yako
5 Webhu kurodha kumhanya
6 Peji peji inotsanangura zvinowaniswa nemushandisi
Chii chandinofanira kukoshesa mukuvandudza ruzivo rwevashandisi?
Usati watanga, unofanira kuchengeta mimwe mibvunzo mupfungwa kuti iwe unogona kupindura.
Nderudzii rwevateereri rwandinoda kukwezva? o rudzii rwevateereri ndere webhusaiti?
Chii icho vateereri vanotarisira pavanopinda webhusaiti yangu?
Ndezvipi zvishuwo uye zvinokurudzira zvinokusundira iwe kuti upinde saiti yangu?
Ndeipi nhanho yenzvimbo yandinokupa iwe kuti usangane nezvaunotarisira?
Nekupindura iyi mibvunzo iripamusoro zvakaringana uye chaizvo, unogona kuwana zano rekuti ungaitisa sei yako dhizaini. Dzimwe nguva, chokwadi chekugadzirisa uye kuita shanduko chinotibatsira kuve neruzivo rwakajeka rwekuti zvinofanirwa kunge zviri sei. Kuziva kana isu tiri kubudirira mune zvakanakisa, Izvo zvinodikanwa kuti uongorore zvimwe zvinhu. Vanogona kubva inguvai vashandisi yavanoshandisa paavhareji pane webhusaiti yedu, kana iwo mavara ari nyore kuverenga kubva kune chero chishandiso, kana zvemukati zvichisanganisa midhiya akasiyana kuti ruzivo rwavo ruwedzere kunakidza, uye kana mushandisi wako achigona kusvika kumasevhisi kana zvigadzirwa zvaunopa nekungobaya kaviri. Pese panogona kugadziriswa chinhu, chinenge chisungo chekuzviita.
Natsiridza ruzivo rwevatengi kuti uwedzere kushandurwa kwewebhu webhusaiti
Kuti utange, unofanira shingairira dingindira rakajeka uye rinoonekwa. Kuwedzeredza nezvakanyorwa uye mabhatani uye mamamenyu uye zvinongedzo uye tabo uye ... Unozviona here? Kunyangwe kuverenga saturates, fungidzira kana iri nezviri mukati. Ndinoziva pane kudiwa kwekuita zvese zvatinopa kuti zvioneke, asi kuwandisa kunogona kuvhara. Pamusoro pazvose, kune vatsva, kuti pakupedzisira, kana ukachengeta mushandisi, ivo vachazogara vari vatsva pane imwe nguva.
Kuwana kunofanirwa kuve kunofambiswa kune mushandisi kuti awane zvavari kutsvaga, kudzikisira kuzadza peji.
Ini ndinofungidzira kuti dzimwe nguva, wauya kune webhusaiti uye zvingave zvakakuomera kuti uwane zvawanga uchitsvaga. Izvi ndizvo zvaunofanira kudzivirira kuti zvisaitike wega. Iwe unofanirwa kutora mushandisi kuti awane zvavari kutsvaga, nemeso mashoma. Iyo yakajeka uye inoonekwa menyu uye chimiro. Zvishoma zvakawanda.
Dhizaini yakashandisirwa kumidziyo yakasiyana
Kugadzirisa yako webhusaiti ine inoteerera dhizaini ichavandudza yako webhu kumisikidza Asi iwe unofanirwa kufunga nezve kubva kune icho chishandiso vazhinji vevashandisi vako vanowanzouya kuzoisa kusimbisa kwakawanda pane dhizaini yeiyo chaiyo mudziyo. Rangarira kuti mashandisiro anoita vashandisi kubva kune yega kifaa akasiyana, uye kuti dhizaini inofanirwa kuve inofambiswa uye kugadzirirwa kune ese mamiriro.
Kugamuchira Dhizaini: Iyo yakanyanya kunaka sarudzo kune yakawanda-kifaa webhusaiti
Chengetedza zvirimo pane zvaunonyora pawebhusaiti yako
Uye neizvi Ndiri kureva zvakawanda nezve marongero ezvinyorwa pane zvaunonyora. Izvo hazvisi kuti hazvina basa kuti iwe unoti chii, asi hazvisi zvese zvine kukosha zvakafanana uye kunyangwe vanhu vazhinji havasi kuzoverenga zvese. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kufambisa mukana kune izvo zvemukati izvo zvinovafadza, zvichiratidza zvakakosha zvinhu. Zvinoti:
Mazita ezvinzvimbo. Zvichienderana nemusoro wenyaya, uye kusanganisira zvikamu zvidiki mavari. Zvese zvatinoti H2, H3, H4… nezvimwe.
Ushingi uye tatsveyamisa mabhii. Kunyanya kana iwe ukasanganisira akareba zvinyorwa pawebhusaiti yako, uye kune zvakanyanya vasingashiviri vashandisi. Nenzira iyi iwe uchave uine yakajeka uye nekukurumidza kuona izvo zvauri kutaura nezvazvo uye zvakakosha zvinhu.
Strikethrough. Kuyambuka kunogona kuve nzira yakanaka, inogona kutove inonakidza zvichienderana nechinangwa chauinacho. Kunyangwe kutaura zvisina maturo uye zvisina maturo.
Colors. Usaite muraraungu futi, asi shandisa mavara anoenda neyako dhizaini, kana logo, kana mweya. Rangarira kuti rumwe ruvara rune fananidzo nemanzwiro uye madingindira.
Typology. Tsamba dzakajeka uye dziri nyore kuverenga. Kuti iwo ane gimmicky iwo anogona kuve akanaka kwazvo, asi ivo vanokurumidza kunetesa maziso.
Iyo zvakare inodzivirira iyo hombe ramblings, zvisinei nezvakakosha zviri mukati. Vatarisana nebhuru rakakura remavara, vashandisi vanowanzo svetuka maziso avo kune inotevera poindi.
Webhu kurodha kumhanya
Izvo zvinoshungurudza uye iyo yakareba inotora webhusaiti kurodha, kunyanya kusagutsikana kunogadzira muvashandisi. Chengetedza macode, cache, huremu hwemifananidzo, plugins, dzivirira kupenya kwemaficha, nezvimwe. Kune mapeji anotora zvinotyisa kutakura, uye kunze kwekunge mushandisi azviziva kuti izvo zvavanowana pane yako webhusaiti ndizvo zvavanenge vachitsvaga, nekuti ivo vakatoshanyira kare kana nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, unogona kuzvirasa zviri nyore.
Pane mapulagi ekukubatsira mune ino maitiro, Muizvi Ragose webhusaiti iwe uchawana akawanda zvichienderana nezvauri kutsvaga. Nenzira imwecheteyo, yeuka kuti kumhanyisa kumhanyisa kwechigadzirwa chega chega hakuna kufanana, uye kuti dandemutande rinofanirwa kuchinjiswa kune yega yega kifaa.
Peji peji inotsanangura zvinowaniswa nemushandisi
Uye nenzira yekupedzisa, hapana chimwe cheizvi chingangobatsira kana iwe ukasataura kumberi izvo izvo mushandisi achawana pane webhusaiti yako. Vazhinji vavo vanozoenda kana vakaona kuti zvavanotarisira hazvina kuzadzikiswa, kana ivo vasingazive chaizvo zvavachawana uye kunyangwe zvishoma zvazviri Peji rega rega repamba rine ruzha rwaro nechigadzirwa kana sevhisi yauri kupa. Izvo hazvizove zvakafanana dhizaini iyo webhusaiti iyo inotengesa zvigadzirwa zvevadhudhudhu vanoshandisa seiya yemeteorology blog.
Ita shuwa kuti iwe une peji rekumba rinotsanangura sechirevo kuti ndezvei, ndezvipi zvemukati zvekutsvaga kana kupa, uye nekuita zvakasiyana-siyana, kugara uchifambisa kudyidzana kwevashandisi nayo. Ndiwo zvakare mukana wekushandurwa kwevashandisi. Rangarira kuti iko kwekutanga kufunga kwemunhu pane webhusaiti kunowanzoita mamiriro emamiriro uye ongororo yemberi neiyo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Makiyi ekuvandudza ruzivo rwevashandisi kuburikidza newebhu dhizaini
Heatmaps: 5 maturusi ekuvandudza kutendeuka
Mazano ekugadzirisa yako webhusaiti yemafoni nhare